တရုတ်နိုင်ငံ၏ Gen Z လူငယ်မျိုးဆက် : နည်းပညာနှင့် big data ၏ အကူအညီဖြင့် လူငယ်လယ်သမားများ အောင်မြင်မှုရရှိနေ - Xinhua News Agency
ဝယ်သူအား စပါးအိတ်တစ်အိတ်ကို ပြသနေသည့် Chen Shuaiyu အား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ချန်ရှား၊ ဇွန် ၁၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
Chen Shuaiyu သည် ကောလိပ်မှ ဘွဲ့ရရှိပြီးနောက် ပြည်ပတွင် အလုပ်အကိုင်ရရှိရန် အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့သော်ငြားလည်း ၎င်းအနေဖြင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၌ ခိုင်မာသောအလားအလာများကို မြော်မြင်တွေးဆလျက် မွေးရပ်မြေမှာပင် လယ်သမားတစ်ယောက်အဖြစ် ဆက်လက်နေထိုင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Jiang Qiangen အား လယ်ကွင်းများ၌ ထွက်ယက်စိုက်ပျိုးနေသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် လယ်သမားလေးသည် တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟူနန်ပြည်နယ်၊ Changde မြို့၊ Dingcheng ခရိုင်၌ နေထိုင်သူဖြစ်သည်။
Chen သည် ၁၉၉၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကြား မွေးဖွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၏ Generation Z လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။
“၂၀၁၆ ခုနှစ်ကစပြီး ကျွန်တော်က ကောလိပ်တက်တဲ့နှစ်တွေမှာ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်တွေနဲ့ စပါးအခြောက်ခံစင်တာတွေ ဖွင့်လှစ်ပြီး ရရှိတဲ့ဝင်ငွေတွေနဲ့ အသုံးပြုနေတာပါ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်မူ Chen သည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာဖြန့်ချိရေး၊ လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုများ၊ စပါး စိုက်ပျိုးထွန်ယက်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်း စသည်တို့ ပေါင်းစည်းထားသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။
“စပါးရောင်းရငွေက ယွမ် သန်း ၃၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄.၄၆ သန်းခန့်) ရှိတယ်” ဟု ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
Duan Zhao နှင့် Duan Yu တို့သည် ဟူနန်ပြည်နယ်၊ ယိယန်မြို့၊ ဟဲဆန်းခရိုင်မှ ဝမ်းကွဲညီအစ်ကိုများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် “စပါးစိုက်ပျိုးရေး မိတ်ဖက်လုပ်ကိုင်သူများ” ဖြစ်ကြပြီး Generation Z လူငယ်မျိုးဆက်များလည်း ဖြစ်သည်။
ယင်းညီအစ်ကိုနှစ်ဦးတို့သည် ဘွဲ့ရရှိပြီးနောက် ဟူနန်ပြည်နယ် မြို့တော် ချန်ရှားတွင် နေထိုင်နေကြသော်လည်း ၎င်းတို့နှစ်ဦးလုံးသည် မွေးရပ်မြေသို့ ပြန်သွားရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
အတွေ့အကြုံအပေါ်၌သာ အမှီပြုသော မျိုးဆက်ဟောင်းများနှင့် မတူကွဲပြားလျက် အဆိုပါ ညီအစ်ကိုတို့သည် အချက်အလက် (data) အပေါ်၌ အာရုံစိုက်လျက်ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် အရည်အသွေးမြင့်မားမှုနှင့် အထွက်နှုန်းမြင့်မားမှုကြား မျှခြေကိုရှာဖွေရန် စမ်းသပ်လယ်ယာ၌ ပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲမှုလျှော့ချရေး လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့ လယ်ကွင်းတွေပေါ်ကို ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းတဲ့အခါ မှန်ကန်တဲ့ဆေးပမာဏနဲ့ အချိန်ကို အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်” ဟု Duan Zhao က ပြောခဲ့သည်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင် အသုံးပြုခဲ့သော အဓိက ကိရိယာများမှာ အပင်များကာကွယ်ရေး UAVs နှင့် စမတ်ဖုန်း Apps များ ဖြစ်ကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
ယင်းသို့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့သည် ပိုးသတ်ဆေးအသုံးပြုမှု ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချခြင်းဖြင့် mu တစ်ခု (၀.၀၇ ဟက်တာ) လျှင် ကုန်ကျစရိတ် ၇ ယွမ်ကိုလျှော့ချပေးသည်သာမက ပိုးသတ်ဆေးများ အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းကြောင့် ပျိုးပင်များပျက်စီးခြင်းကိုလည်း ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့ကာ ထွက်နှုန်း ၁၀ ကီလိုဂရမ်ခန့် မြင့်တက်လာသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။
“ဒီနည်းလမ်းကို အနီးဝန်းကျင်က အခြားလယ်သမားတွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်” ဟု Duan Zhao က ဆိုသည်။
အသက် ၃၄ နှစ်အရွယ် Jiang Qiangen သည် ရီးယန်မြို့၊ အန်ဟွေးခရိုင်၊ ထျန်းကျွမ်းမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သော လယ်သမားတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အခြားလယ်သမားများအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မပြည့်မီသော၊ မနှစ်သက်သော “လက်ကျန်လယ်မြေ” လက်ကျန်လယ်မြေ ၄၀၀ mu (၂၇ ဟက်တာခန့်) ကို ကနဦးပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့သည်။
“မကြာသေးမီနှစ်တွေက ဒေသန္တရအစိုးရက မူဝါဒတွေအများကြီး ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ လယ်သမားအသစ် တစ်ယောက်အဖြစ် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့လယ်မြေ အလဟသဖြစ်မယ့်အရေးကို ရှောင်ရှားဖို့ တာဝန်ရှိတယ်လေ” ဟု Jiang က ပြောခဲ့သည်။
“လူကြီးတွေအတွက်တော့ လယ်စိုက်ခြင်းက အလုပ်ကြမ်းသမားပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ‘ခေတ်သစ်လယ်သမားတွေ’ အတွက်တော့ လယ်စိုက်ခြင်းက ဖန်တီးမှုနဲ့ အလုပ်အကိုင် စိန်ခေါ်မှုပါပဲ” ဟု ၎င်းက ပြောခဲ့သည်။ (Xinhua)
China’s Gen Z: Aided by tech and big data, young farmers thrive
CHANGSHA, June 16 (Xinhua)–Chen Shuaiyu had the opportunity to work abroad after college graduation, but instead decided to remain in his hometown to beafarmer, thinking highly of the solid prospects in agriculture.
The 27-year-old farmer lives in Dingcheng District, Changde City, central China’s Hunan Province.
Chen isamember of China’s Generation Z having been born between 1995 and 2009.
“Since 2016, I have been using money I earned during my college years to open agricultural shops and rice drying centers,” he said.
In 2021, Chen foundedacompany integrating in agricultural distribution, social services, rice cultivation, processing, and sales.
“The sales revenue from rice reached 30 million yuan (about 4.46 million U.S. dollars),” he added.
Duan Zhao and Duan Yu are cousins from Heshan District in the city of Yiyang, also in Hunan. They are “grain farming partners” and also members of Generation Z.
After graduation, the cousins could have stayed in Changsha, the capital city of Hunan, but both of them chose to return to their hometown.
Unlike the older generation who rely on experience, the cousins focus on data. They conduct trials of pesticide reduction in experimental farmland to find the balance between high quality and high yield.
“When we sprayed the pesticide on farmland, we keep detailed records of the accurate dose and time,” Duan Zhao said, adding that key tools used in the trials are plant protection UAVs and smartphone Apps.
By comparison, they found thata10 percent reduction in pesticides not only reduced the cost by7yuan per mu（about 0.07 hectares）, but also avoided damage to seedlings caused by excessive pesticides, increasing production by about 10 kilograms.
“We have introduced the method to other farmers nearby,” Duan Zhao said.
Jiang Qiangen, 34, isafarmer in Tianzhuang Township of Anhua County in the city of Yiyang. He took the initiative to cultivate 400 mu (about 27 hectares) of “leftover farmland”, which was inefficient and unfavored for other farmers.
“In recent years, the local government has carried outaseries of policies. Asa‘new farmer’, I take responsibility for avoiding the waste of arable land,” Jiang said.
“For the older generations, farming meant to hard labor, but for ‘new farmers’, farming isacreative and challenging career,” he said.
Photo 1: Chen Shuaiyu showsabag of his rice toacustomer. (Xinhua/Zhou Mian)
Photo 2: Jiang Qiangen is ploughing in the fields. (Xinhua/Zhou Mian)